Hogaamiyaha xisbiga Moderat-ka oo farqaha lugu dhagan yahay | Somaliska
Xisbigga Moderat-ka oo mar ka ahaa xisbiga labaad ee ugu awooda badan dalkaan ayaa haatan waxaa hareeyey buuq la xirriira in xilka laga qaado hogaamiyaha jagadaasi heeysa haweeneyda lugu maacabo Anna Kindberg Batra. Buuqan ayaa salka haya masuug ka imanaya xubnaha ka tirsan xisbigaas oo sheegay in Kindberg ku guul gareeysay in ay gaasiiso bulshadda siyaasadda xisbiga.
Hase ahaata Kindberg oo maanta saxaafadda la hadashay ayaa diiday in ay aqbasho baaqyada ka imanaya xibnaha diidan hogaaminta xisbiga. Iyadoo u warameeysa wargeyska Aftonbladet ee dalkaan Iswiidhan ayey sheegtay ineey dooneeyso ineey dhameeysato waqtigeeda iyadoo xisbigu horey u doortay. Anna waxaa ay farta ku fiiqday xiisadda ka dhex taaagan xisbiga oo ay sheegtay ineey tahay mid adag oo ay dhinaceeda dooneeyso ineey isu soo dhaweeyso damacyada kala duwan ee xisbiga.
“In rabshado isku sameeyno meel kuma gaareeyno” ayey tiri iyadoo ka hadleeysa aragtideeda la xirriirta guuxa ka soo yeeraya xubnaha dhaliishan, iyadoo misna tilmaantay in arrimaha dhacaya ay ka qaaday fir fircooni waa sida ay hadalka u dhigtaye.
Degmooyinka hoos yimaada caasimadda Stockholm oo ah halka taageerada ugu badan xisbiggu ku lahaan jiray ayaa haatan waxaa ka soo yeeraya buuq ay ku doonayaan xilka ka degto, sidaas si la mid ah waxaa u doonayaan faracyadda xisbiggu ku leeyahay Dalarna, Västerbottens iyo Uppsala iyo urrurka dhalinyaradda ee xisbiggu leeyahay ee Muf. Ugu dambeyntii lama oga halka ay salka arrini dhigi doonto iyo buuqa hareeyey xisbigga. Iyadoo baaqyada ugu waa weeyni ay ka imanayaan xildhibaanadda gollaha deegaanadda fadhiya deegnadda caasimadda Stockholm ku teedsan.